UMike Tyson kunye noRoy Jones Imilo yokugqibela kwiHeavyweight | boxen247.com
29 EyeThupha 2020
UMike Tyson (uMboniso ka-2006) kunye noRoy Jones Jr.Ukulwa kuphela kwiHeavyweight
Ngokujongwa kobunzima obukhulu kutshanje kuDillian Whyte uphulukene no-Alexander Povetkin kwaye njengoko silindele ukubulawa kwabantu kukaDaniel Dubois vs Ricardo Snijders ngokuhlwanje, masithathe ukugxila kumdaka we-heavyweight wangoku (othi ngokuthe ngcembe ufumane ukucaca) kwaye ubonise ukuba uninzi ndibiza ifarce.
Mna ngenxa yoko ndiye ndafudumeza le nto kwaye ndinomdla kakhulu kwimibuzo emininzi eza kuphendulwa ngethemba. Kum, lulonwabo oluluhlobo lweentlobo njengoko ngamanye amaxesha ndibeka amathe ekufanekiseni abo babini kwindandatho kunye neepunch (okanye mhlawumbi akunjalo).
Njengomntu owaziyo umdlalo wamanqindi ungayixabisa inzima kaJones Jr. alwe ngokuqinisekileyo. Umlo wokugqibela kaMike Tyson, umboniso wokulwa noCorey Sanders ngo-2006 kunye nomlo kuphela kaRoy Jones Jr ngo-2003, unokukunika umbono wokuba ungalindela ntoni kumlo ozayo ngoNovemba 28 kunye nesiphumo. Okanye mhlawumbi akunjalo.
Kukho imibuzo emininzi ejikeleze lo mboniso onokuthi uthathwe kuphela njengesiganeko. Ewe, uTyson ukwimeko ebhetele kakhulu ngoku kwaye kubonakala ukuba ujoliso lwakhe lubuyile kodwa ngoku uneminyaka engama-54. Kwaye yintoni esele ishiywe nguJones Jr (ngakumbi ngesilevu sakhe esele sikho ngoku)?
IMIKE TYSON vs COREY SANDERS 2006
Umdlalo kaRoy Jones kuphela kobunzima obabunzima yayikukuchasana noJohn Ruiz owayekhusela inqaku leWBA lesihloko ngo-2003.
UROY Jones Omnci. VS UJOHN RUIZ
Konke okufuneka ukwenze kukucofa kula makhonkco angentla kwaye uya kukukhokelela kwiphepha elikwiwebhusayithi yethu apho kulwelwa khona.
Owu, kunye nembonakalo yomlo we-Dubois ngokuhlwanje… sukuqhwanyaza.
UDennis Contreras kunye noCassius Chaney woyisa eFlorida	UDaniel Dubois uyeke uRicardo Snijders kumjikelo wesi-2 kunye nokulwa iziphumo zeKhadi (eUK)